Depiote Razafintsiandraofa Jean-Brunelle: “Tsy hisy faritra sy distrika hohadinoina intsony” | NewsMada
Depiote Razafintsiandraofa Jean-Brunelle: “Tsy hisy faritra sy distrika hohadinoina intsony”
“Ho tanteraka tokoa ny tenin’ny filohan’ny Repoblika hoe tsy hisy faritra sy distrika hohadinoina intsony. Satria hita taratra manomboka amin’ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana nasiam-panitsiana izay.”
Io ny fanehoan-kevitry ny depiote voafidy tany Ikongo, Razafintsiandraofa Jean-Brunelle, manoloana ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana nasiam-panitsiana, taona 2020, izay azo itarafana ny fampandrosoana mipaka any ifotony.
Tsy mivangongo amin’ny toerana iray intsony ny vola
Mivoatra be izay lalàna mifehy ny tetibola nasiam-panitsiana izay, araka ny fijeriny. Tsy mivangongo amin’ny toerana iray intsony ny vola fa saika mahazo ny anjarany avokoa ny faritra sy ny distrika rehetra. Tombony lehibe izay, ary ezaka goavana ataon’ny firenena mitondra marina mankany amin’ny fampandrosoana isam-paritra.
Fanamboarana ny lalana Ikongo
Tafiditra ao anatin’izay lalàna mifehy ny tetibola nasiam-panitsiana izay, ohatra, ny fanamboarana ny lalam-pirenena faha-14, mampitohy ny distrikan’Ifanadiana sy ny distrikan’Ikongo ary ny distrikan’i Vohipeno. 5 miliara Ar no vongam-bola voalohany hanombohana ny fanamboarana io lalana io, manomboka amin’ity taona ity. Hiitatra izany amin’ny taona ho avy sy ny manaraka rehetra mandra-pahavita azy ho tara.